Gọọmenti Anambra Amàlitela Ịkpọchisị Ụfọdụ Ụlọ Ọrụ Maka Atụghị Ụtụ Isi
Previous Article Wike e Turu Ugo na Rivas
Next Article A Ga-Arụcha Ụzọ Ahụ Ugwunwasike - Azụ Ogbunike Tupuu Ọnwa Mee Agwụ -- Obianọ
Dịka a sị na onye a gwara agwa, ma ọ nụghị anụ, o mee emee, ọ hụ ahụ; gọọmenti steeti Anambra amalitela imechisi na ịkpọchisi ọtụtụ ụfọdụ ụlọ ọrụ ndị nnọrọ dị na steeti ahụ, n'iji nnupù isi ha n'ịtụ ụtụ kwesiri na ha ga-atụ.
Nke a bụ nke e mere site na nkwàdo akwụkwọ ikike e nwètàrà site n'aka ụlọ ikpe ukwu steeti ahụ, bụrụ nke weere ọnọdụ na Awka bụ isi obodo steeti ahụ, Ọnịtsha, Nnewi na ụfọdụ ebe ndị ọzọ, ma bụrụkwa nke e mere site n'aka ụlọ ọrụ 'Anambra State Internal Revenue Service', ndị òtù ọrụ 'Nigeria Security and Civil Defence Corps' na ndị ọrụ uwe ojii.
N'okwu ya bànyere nke ahụ, onyeisi oche nke ụlọ ọrụ 'Anambra State Internal Revenue Service', bụ Dọkịta David Nzekwu kọwara na nke ahụ dabàrà adaba na ntụziaka na ebumnobi gọọmenti steeti ahụ na-achụso ugbu a, bụ ịkwàlite ọnụ ego a na-enweta na steeti ahụ kwà ọnwa ọbụla, bụkwa nkè ọ sị na ha na-agbaso ùsoro iwu were na-emezùputa.
O mere ka a mara na ụlọ ọrụ ọhụụ ọbụla kwesiri idebànye aha n'akwụkwọ ma màlite tụba ụtụ ya na ụtụ isi ndị na-arụ ọrụ ebe ahụ, n'agbàtà ọnwa isii ha jìrì malite ọrụ, ọbụnadị dịka o mere ka a mara na akwụkwọ iwu na-akọwa maka ụtụ isi kọwapụtàsịrị ihe ndị ahụ niile n'ebe o dòrò anya ọma. O kwuru na amụma ịkpọchisi ụlọ ọrụ a ha màlitere imezuputa ugbua ga-eme ka ọtụtụ mmadụ na ụlọ ọrụ màlite ịtụ ụtụ isi ha n'ụzọ na n'oge kwesiri ekwesi, ma kwukwazie na onye ọbụla nwara ànwà, tiwaa, gbapee ma ọ bụ kpọpee ụlọ ọrụ ndị ahụ ha kpọchiri ga-abụ onye a ga-akpụpụ ụlọ ikpe ma wèré ùsòrò iwu nyụchaa ya anya, n'ihi na gọọmenti agaghị ada mbà n'imezùpúta atụmatụ ahụ o ji n'aka n'uju.
Ụfọdụ n'ime ebe ndị ahụ ha kpọchiri gụnyèrè:
ụlọ ọrụ Suburd Consortium dị n'Awka, bụ ndị ji ụgwọ ụtụ karịrị nde Naịra ise màlite n'agbàtà ọnwa Jenụwarị ahọ 2011, wee ruo ọnwa Ekeresimeesi ahọ 2016; ụlọ ọrụ 'Eteleson Industries' dị n'Ogbunike, màkà ịgbanahị ịtụ ụtụ isi ya n'agbata ahọ 2010 wee ruo ahọ 2015, bụ nke karịrị nde Naịra iri abụọ; ụlọ ọrụ Nelly New Town Hotels and Suites dị n'Ọba, bụ nke ji ụgwọ ụtụ isi ruru nde Naịra asatọ n'agbatà ahọ 2014 na 2016; ụlọ ọrụ Ejiamatu Microfinance Bank dị n'Ojoto, bụ nke ji ụgwọ karịrị nde Naịra iri na isii; ụlọ ọrụ Delendu Aluminium Manufacturing dị n'Onitsha, nke ji ụgwọ karịrị nde Naịra asatọ, ụlọ akwụkwọ Good News Academy, Ogidi, ji ụgwọ ruru narị puku Naịra asaa, tinyere ọtụtụ ndị ọzọ.